Laba jiir oo lagdamaya sawirkooda oo noqday midkii ugu cajiibsanaa - BBC News Somali
Laba jiir oo lagdamaya sawirkooda oo noqday midkii ugu cajiibsanaa
Lahaanshaha sawirka Sam Rowley/WPY
Image caption Sam Rowley wuxuu shan habeen ku qaatay isagoo isku dayaya inuu sawirkan qaato
Qof walba oo ku safray qadka tareennada dhulka hoostiisa ah ee London wuu yaqaannaa kuwan - waa jiirka yar ee madow, oo ka soo baxa qeybaha hoose.
Sam Rowley wuxuu aad u daneynayay inuu sawir cajiib ah halkan ka helo, muddo hal isbuuc ah ayuuna ku qaatay isagoo isku dayaya inuu sawirkaas ka qaado labada jiir.
Habeen habeennada ka mid ah, wuxuu qabtay sawir muujinaya iyagoo si dhab ah ugu dagaallamaya raashin uu iska tuuray qof rakaab ahaa.
Sawirkaas wuxuu horseeday in Sam uu ku guuleystay abaalmarinta sawirrada xayawaannada ee sannadka, taas oo ay bixiso LUMIX People's Choice.
Taageerayaasha barnaamijkan abaalmarinta ah ayaa laga codsaday inay soo qiimeeyaan sawirradii la soo xulay bishii October, laakiin kuwo kale oo cusubna way jireen.
Lahaanshaha sawirka Michel Zoghzoghi/WPY
Image caption Labo shabeel oo ku mashquulsan inay cunaan jabiso weyn - sawirkan waxaa qaaday Michel Zoghzhog
Dad gaaraya 28,000 oo ruux ayaa u codeeyay sawirka, iyagoo muujiyay in ay aad u jecleysteen dagaalka labada jiir.
Habeen saq dhexe ah ayuu ku gaaray isagoo caloosha dhulka ku nabaya, si uu u helo sawirka ugu quruxda badan.
Wuxuu sawirka si fiican usoo baxay ka dib markii ay labada jiir isku qabsadeen cuntadii u dhaxeysay. Markii ugu horreysay waxay xoogaa yar ku murmeen midka hor cunaya, kaddibna way kala dhaqaaqeen.
"Mar walba waan qaadaa sawirro cajiib ah, kanna nasiib ayaan u yeeshay, laakiin shan habeen ayey igu qaadatay inaan helo, dabcanna way ii qorneyd inaan ugu dambeyn ku guuleysto", ayuu yiri Sam.
Sawir-qaadahan oo reer London ah wuxuu hadda ku sugan yahay magaalada Bristol, halkaas oo uu kaga qeyb qaadanayo cilmibaaris ay BBC-da ku sameyneyso taariikhda dabiiciga ah.
Sam wuxuu sheegay in sawiri ka qaadidda xayawaannada uu aad u jecel yahay. Wuxuu aaminsan yahay in dadku ay xiriir la leeyihiin xayawaannada, marka ay magaalooyinka joogaan, sababtoo ah xayawaannadan way nala nool yihiin.
Lahaanshaha sawirka Aaron Gekoski/WPY
Madxafka taariikhda dabiiciga ah ee London ayaa qabta barnaamijka tartanka abaalmarinnada sawirrada xayawaanka.
Sir Michael Dixon, oo ah agaasimaha madxafka ayaa sawirka guushu ay raacday ka yiri: "Sawirka Sam wuxuu na tusayaa sida cajiibka ah ee ay xayawaannadu ugu dhaqmaan meelaha ay bani'aadanka joogaan. Dhaqanka ay labada jiir sameeyeen wuxuu la mid yahay waxyaabaha aan maalin kasta sameyno, sida gaadiidka aan istcmaalno iyo raashinka aan cunno. Waxaan rajeynayaa inay dadka dhiirrigaliso ayna wax badan kasii fikiraan xiriirkaas".
Waxaa jiray afar sawir oo iyagana isla wada galay kaalinta labaad, ama si aad ah loo jecleystay, markii codeynta loo qaadayay.
Mexico: Xuska maalinta mowtada (Sawirro)
Xayawaannada sameeyay ficilladii ugu qosolka badnaa 2019-ka
Sawirradii Afrika ugu fiicnaa
Waxaa ka mid ah daanyeer nasiib daran oo loogu labisay tartanka feerka, kaasoo uu qaaday Aaron Gekoski.
Sawir kale oo cajiib ah oo muujinaya hooyo shabeel ah iyo cunugeeda oo la dagallamaya jabiso weyn, kaas oo uu qaaday Michel Zoghzhogi; iyo sawirka nin ciidamada ilaalada duurjoogta ah oo la sawiray isagoo eegaya wiyil yar oo nooca madow ah, sawirkaas oo uu qaaday Martin Buzora. Waxaa kaloo ka mid ahaa sawirka koox xayawaanka arctic loo yaqaanno ah oo cad cad, kuwaas oo la sawiray iyagoo baraf dhex fadhiya, sawirkaasna waxaa qaaday Francis De Andres.
Tartanka 56-aad ee abaalmarinta sawirrada xayawaannada waxaa hadda go'aankiisa gaara koox khubaro ah, tartamaha ugu sarreeya waxaa lagu dhawaaqi doonaa bisha October.
Lahaanshaha sawirka Francis De Andres/WPY
Image caption Koox xayawannada arctic loo yaqaanno ah oo cad cad, oo uu sawiray Francis De Andres.
Lahaanshaha sawirka Martin Buzora/WPY
Image caption Sawir qalbiga taabanaya oo laga qaaday Wiyil yar iyo askari ka tirsan ciidanka ilaalada duurjoogta - waxaa sawiray Martin Buzora
Dhammaan sawirrada waxay leeyihiin xuquuq u gaar ah.
Sawirro: Goobaha ugu caansan dalxiiska Sucuudiga
28 Sebtembar 2019
Sawirrada todobaadka iyo Afrika: 26 May - 1 June 2017
Sulawesi: sawirro muujinaya sida ay duufaanta u saameysay jasiiraddaasi
Sawirro Sawirro: Tartan taallo dad ah oo ka dhacay Spain